Ukunikezela Ngaphandle kweThala leNkundleni, ukuKhanya kweeNkundla zePatrick, iiLight Outdoor Arena ezivela kuMveliso waseChina
Inkcazo:Ukukhanya kweThala lePhandle,Iimpawu zoLwazi lweMidlalo,Ukukhanya kwee-Outdoor Arena,Iinjongo zeLed Arena,,
Home > Imveliso > Iintambo zeMidlalo > Ukukhanya kweThala lePhandle
Iintlobo zeMveliso ze- Ukukhanya kweThala lePhandle , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Ukukhanya kweThala lePhandle , Iimpawu zoLwazi lweMidlalo ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
UkuKhanyiswa kokuKhanya kweLwandle ama-300w ama-600w ama-5waranti  Qhagamshelana Ngoku
Ukukhokelwa ngaphandle kweSibane sokuKhanya iiBhule ezingama-400 Watt  Qhagamshelana Ngoku
Umgangatho oMkhulukazi weLogu Izibane ezingama-400W 3000K  Qhagamshelana Ngoku
I-300W Ngaphandle kweLed Halogen yeZikhukhula UkuBekwa ngokutsha  Qhagamshelana Ngoku
Ukukhanyiswa kweZikhukula zamanzi ezinganikezelwanga ngu-500 Watt 65000LM  Qhagamshelana Ngoku
Ukukhokelwa kweNtshukumo yokuKhanyisela i-300W 39000LM 5000K  Qhagamshelana Ngoku
UkuKhanya koKhuseleko loKhuselo ukukhanya kwe-800W 104000LM  Qhagamshelana Ngoku
Ukukhokelwa kokuKhanya kweLwandle lweMitha ye-Metali engu-400W  Qhagamshelana Ngoku
I-960W ikhokele ukulungiswa kwebala lebhola ekhatywayo  Qhagamshelana Ngoku
I-800W ekhokelwa kukukhanya kwebala lemidlalo libe li-5000k  Qhagamshelana Ngoku
I-800W i-LED yangaphandle yesibane  Qhagamshelana Ngoku
I-800W ikhokele iBhola yeBhola ekhatywayo  Qhagamshelana Ngoku
I-800W ikhokelele ukukhanya kwezikhukula kwibhola yebhola  Qhagamshelana Ngoku
Amabala aphezulu i-960W ibala lezemidlalo lakhokelela kwizibane ezitshisayo  Qhagamshelana Ngoku
Izixhobo eziphezulu zokuKhanyisa iMast 500W 65000LM  Qhagamshelana Ngoku
Uluhlu lwexabiso le-500W Led High Mast  Qhagamshelana Ngoku
I-1200W i-Pole Design yePole enkulu ye-5000K  Qhagamshelana Ngoku
I-IP65 ephezulu ye-Mast ekhanyiselwe i-1000W 130000LM  Qhagamshelana Ngoku
Umgangatho ophezulu wokukhanyisa ukukhanya kwe-LightW 800W 104000lm  Qhagamshelana Ngoku
600W I-High Mast Lighting Design System engu-78000lm  Qhagamshelana Ngoku
Iimpawu eziphakamileyo zokukhanyisa izibane zokukhanya zokukhanya zokukhanya kwezibane  Qhagamshelana Ngoku
UkuKhanyiswa kokuKhanya kweLwandle ama-300w ama-600w ama-5waranti
Ixabiso lento: USD 1 / Piece/Pieces
Packaging: I-1pcs / i-CTN
Amandla okubonelela: 300000pcs per month
Oku kukhanya koMkhukula okuKhawulezileyo i- 600w ibala ye-78,000lumens. UkuKhanyiswa koMkhukula weLed 300w ngokulinganayo Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo ezinjengeenkundla zebhola yebhasikiti,...
Ukukhokelwa ngaphandle kweSibane sokuKhanya iiBhule ezingama-400 Watt
Oku kukhanya koMkhukula i-400 Watt ubalo lwe-52,000lumens. Izibane zeLalds ezikhanyayo zemini Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo ezinjengeenkundla zebhola yebhasikiti, iinkundla zebhola yomnyazi kunye...
Umgangatho oMkhulukazi weLogu Izibane ezingama-400W 3000K
Oku kukhokelela kwizibane ezi-400w zoMkhukula ubalo lwe-52,000lumens. Isibane seLed of Light 3000k Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo ezinjengeenkundla zebhola yebhasikiti, iinkundla zebhola yomnyazi...
I-300W Ngaphandle kweLed Halogen yeZikhukhula UkuBekwa ngokutsha
Esi siphumo siphezulu se- Watt engu-Led of Light Light ubalo lwe-39,000lumens. Ukufakwa endaweni yokukhanya kwakhona kweLed Halogen kuMkhukula kulungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo ezinjengeenkundla...
Ukukhanyiswa kweZikhukula zamanzi ezinganikezelwanga ngu-500 Watt 65000LM
Iziphumo eziphezulu zakhokelela kwizibane eziKhanyayo ezingama-500w ukubala kwe-65,000lumens. UkuKhanyiswa koMkhukula okuKhanyisiweyo 500 Watt Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo ezinjengeenkundla...
Ukukhokelwa kweNtshukumo yokuKhanyisela i-300W 39000LM 5000K
Esi siphumo siphezulu soMkhukula wokukhanya okungama-300 Watt ubalo lwe-39,000lumens. Umkhenkce wokukhanya kwe-300w ulungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala kunye neendawo zemidlalo ezinjengeenkundla zebhasikiti, iinkundla ze-tennis kunye...
UkuKhanya koKhuseleko loKhuselo ukukhanya kwe-800W 104000LM
Oku kukhanya koMkhukula 800w ubalo lwe-104,000lumens. Izibane eziKhanyisiweyo ze-Amazon Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo ezinjengeenkundla zebhola yebhasikiti, iinkundla zebhola yomnyazi kunye nebhola...
Ukukhokelwa kokuKhanya kweLwandle lweMitha ye-Metali engu-400W
Oku kukhanya koMkhukula 400w ubalo lwe-52,000lumens. Ukukhanya koMkhukula 400w Metal Halide Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo ezinjengeenkundla zebhola yebhasikiti, iinkundla zebhola yomnyazi kunye...
I-960W ikhokele ukulungiswa kwebala lebhola ekhatywayo
I-960W ikhokele ukulungiswa kwebala lebhola ekhatywayo ✔ I-130 LUMENES PER WATT-Esi siphumo siphezulu se- LED Stadium isikhululo sokukhanya se-960W sinobalo lwe-124,800lumens. Ukukhanya okuphezulu kwe-5000K yokukhanya komkhukula kulungele...
I-800W ekhokelwa kukukhanya kwebala lemidlalo libe li-5000k
I-800W ekhokelwa kukukhanya kwebala lemidlalo kwi-5000K I-Bbier yazisa i- 800W ekhokelwa kwinqanaba leNkundla elungiselelwe ukuKhanyiswa kwemidlalo enkulu yangaphakathi nangaphandle, okanye naliphi na elinye ithuba elifuna ukukhanya okukhulu...
I-800W i-LED yangaphandle yesibane
I-800W i-LED yangaphandle yesibane I-Bbier yazisa i- 800W ekhokelwa yiNkundla yokuKhanyisela izibane ezinkulu zemidlalo yangaphakathi nangaphandle kwemidlalo, okanye naliphi na elinye ithuba elifuna ukukhanya okukhulu nomgangatho. Lo mveliso...
I-800W ikhokele iBhola yeBhola ekhatywayo
I-800W ikhokele iBhola yeBhola ekhatywayo I-Bbier yazisa i- 800W ekhokelwa kwiNkundla yeBhola yeBhola ekhatywayo zeemidlalo ezinkulu zangaphakathi nangaphandle, okanye naliphi na elinye ithuba elifuna ukukhanya okukhulu nomgangatho. Lo mveliso...
I-800W ikhokelele ukukhanya kwezikhukula kwibhola yebhola
I-800W ikhokelele ukukhanya kwezikhukula kwibhola yebhola I-Bbier yazisa iKhanyiso yeBhola ekhatywayo yeBhola ekhatywayo yemidlalo yangaphakathi nangaphandle kwemidlalo, okanye naliphi na elinye ithuba elifuna ukukhanya okukhulu nomgangatho. Lo...
Amabala aphezulu i-960W ibala lezemidlalo lakhokelela kwizibane ezitshisayo
Amabala aphezulu i-960W ibala lezemidlalo lakhokelela kwizibane ezitshisayo ✔ I-130 LUMENES PER WATT-Esi siphumo siphezulu se- LED Stadium isikhululo sokukhanya se-960W sinobalo lwe-124,800lumens. Ukukhanya okuphezulu kwe-5000K yokukhanya komkhukula...
Izixhobo eziphezulu zokuKhanyisa iMast 500W 65000LM
Esi siphumo siphezulu se-500W Havells High Mast Lighting ukubala kwe-65,000lumens. Izixhobo eziphezulu zokuKhanyisa iMast Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo ezinjengeenkundla zebhola yebhasikiti,...
Uluhlu lwexabiso le-500W Led High Mast
Esi siphumo siphezulu se-500W ephezulu ye-Mast eLed Street ukubala kwe-65,000lumens. Isibane seLar High Led High Mast Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo ezinjengeenkundla zebhola yebhasikiti, iinkundla...
I-1200W i-Pole Design yePole enkulu ye-5000K
Oku kukhanya okuphezulu kwe-1200W 25m isibalo se-1560,000lumens. Uyilo oluphezulu lwePole ye-Mast Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo ezinjengeenkundla zebhola yebhasikiti, iinkundla zebhola yomnyazi...
I-IP65 ephezulu ye-Mast ekhanyiselwe i-1000W 130000LM
Oku kukhanya okuphezulu kweMast 1000w ukubala kwe-130,000lumens. Izibane eziphezulu zeMal Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo ezinjengeenkundla zebhola yebhasikiti, iinkundla zebhola yomnyazi kunye...
Umgangatho ophezulu wokukhanyisa ukukhanya kwe-LightW 800W 104000lm
Ukufakwa kwePowle ye- Pole ye-800W ephezulu kunamaqela angama-104,000. Ukubalwa kweMaster Lighting Design Calculation ilungele ukukhanyisa iindibano ezinkulu, ii-atnas kunye namaziko ezemidlalo ezifana neenkundla zebhoksik Esi sikhulu esikhulu...
600W I-High Mast Lighting Design System engu-78000lm
Lo mboniso we-600W High High Mast uqikelele kuma-78,000 alumens. Iindleko zokuKhanya eziPhakamileyo ilungele ukukhanyisa iindibano ezinkulu, ii-atnas kunye namaziko ezemidlalo ezifana neenkundla zebhoksik Isistim esikhulu seMaster Lighting System...
Iimpawu eziphakamileyo zokukhanyisa izibane zokukhanya zokukhanya zokukhanya kwezibane
Lo mveliso ophezulu we-500W High Mast Lighting Design linama-65,000 alumens. Izibane zeLotto eziMgangatho ophezulu ilungele ukukhanyisa iindibano ezinkulu, ii-atnas kunye namaziko ezemidlalo ezifana neenkundla zebhoksik Leli xabiso eliphezulu leMast...
KwiChina Ukukhanya kweThala lePhandle Abaxhasi
I-Bbier izisa i- Outdoor Stadium Lighting kwiimidlalo ezinkulu zezemidlalo zangaphakathi nangaphandle, okanye nayiphina indawo efuna ukukhanya okukhulu kunye nokukhanya. Lezi ziLimo zeMidlalo zePortable Stadium zibonelela ngekhwalithi yokukhanya ekhethekileyo kunye nexesha lokufudumala. Ukutshatyalaliswa kwentsholongwane kunye nokuxhatshazwa kweempembelelo ezinokuthi kutywinwe kwaye kukhuselwe kumanzi, ukungcola, ioli, kunye nezimo zezulu ezinzima. Eyakhelwe ukunyamezela, iiLed Outdoor Arena Izilwanyana ziqikelelwa ukuba zingaphaya iminyaka engaphezu kwe-20, kwimizuzu engama-3 yokuhamba kwimihla ngemihla. I-Led Arena Izikhukhula ze-Arena zikhusela i-UV kwaye iphaneli ye-chip ye-LED igubungelwa yilenki ye-polycarbonate engekho i-yellow. Eyilwe ukuba ifakwe kwisibonda okanye udonga. Akukhupheli sisandi okanye ukuphazamiseka kweRF. Iinjongo zeeLed Arena unikezela ukuphucula umboniso nge-glare encinci. Eyilwe ukulwa nokushisa phakathi kwe -4 ° no-104 ° F
Ukukhanya kweThala lePhandle Iimpawu zoLwazi lweMidlalo Ukukhanya kwee-Outdoor Arena Iinjongo zeLed Arena Ukukhanya koMbane oPhandle